Kaalmada Lacagta - UNHCR Egypt
UNHCR waxay isticmaashaa waxqabadyo ku salaysan lacag caddaan ah si ay u bixiso ilaalin, gargaar, iyo adeegyo kuwa aadka u nugul. Lacagta caddaanka ah waxay ka caawisaa barokacayaasha inay daboolaan baahiyo kala duwan, oo ay ku jiraan helitaan cunto, biyo, daryeel caafimaad, hoy, taasoo u oggolaanaysa inay dhistaan ​​oo taageeraan hab-nololeedyada.
UNHCR waxay ku dhiirigelinaysaa kuwa helay SMS-kan soo socda ee telefoonkooda, inay la xiriiraan mid ka mid ah xafiisyada boostada ee soo socda si ay u helaan gargaarkooda lacagta caddaanka ah iyada oo loo marayo hubinta iris scanner.
SMS: “Arrintaada xxx waxay ka heli doontaa kaalmo lacag caddaan ah xafiiska boostada Masar iyada oo loo marayo sawirka IRIS”
Xafiisyada Boostada ee karti u leh Iris:
Oktoobar: El Hossary, Xarunta Adeegga (Mogamma El-khadarat), Degmada toddobaad, Kacaan (Elmotamyez), Degmada Lixaad, Degmada Saddexaad, Degmada Kowaad-Zayed, Bisha Oktoobar.
Giza: Ard El Lewa, Kafr Tuhrmus, Madinet El Awqaf, Haram Central, El Maleka, Mohandssen, Giza First
Bartamaha Magaalada Qaahira: Xafiiska Weyn ee Qaahira
Koonfurta Qaahira: Maadi
Bariga Qaahira: Ain Shams, Zahraa Ain Shams, Martyr Abdel Moneim Riad, Qubaa bari, New Nozha, degmada sideedaad, degmada tobnaad, mashruuca Swiss
Katameya: Hoyga dhalinyarada-Obour, Obour City, Obour Market, Degsiimada koowaad, Madinty, Ururka Orabi, 10-ka Ramadaan, xaafadda 6-aad, xaafadda 33-aad, xaafadda 9-aad, xaafadda 44-aad.
Alexandria: El Mandara, El Montazah, Madinet Fisal, Alexandria Main, El Nokrashy, El Saray
Borg El Arab: El agamy-betash, New Borg El Arab, Hanoveel, Borg El-arab jir, Aagga Xorta ah
Damietta: New Damietta, Kulliyadda ganacsiga, Damietta labaad ee cusub, guryaha Mubarak
Menofiya: magaalada El Sadat
Waa maxay noocyada gargaarka lacageed ee ay UNHCR si toos ah u bixiso?
Kaalmada Lacageed ee Ujeedo Badan: Lacag caddaan ah oo loogu talagalay baahiyaha aasaasiga ah oo si joogto ah loo bixiyo labadii biloodba mar ama hal mar bilaha jiilaalka (deeqaha jiilaalka) oo la siiyo qaxootiga iyo magangelyo-doonka aadka u nugul ee diiwaangashan, marka loo eego natiijooyinka qiimaynta dayacanka.
Deeqaha kale ee lacagta caddaanka ah: sida maciishada iyo lacagta caddaanka ah ee waxbarashada waxaa la bixiyaa hal mar iyadoo la raacayo shuruudaha waaxeed ee ay dalbadaan UNHCR iyo la-hawlgalayaasha kale ee ay khuseyso (sida Adeegyada Gargaarka Catholic).
Ogow in qaxooti kasta oo diiwaan gashan aanu xaq u lahayn in uu helo kaalmo lacageed. Kaalmada lacagta caddaanka ah waxaa la siiyaa qaxootiga aadka u nugul iyadoo lagu salaynayo shuruudo gaar ah.
Miyaan u baahanahay inaan codsado qiimayn si aan u bilaabo helitaanka kaalmo lacageed oo ujeedo badan leh?
Talaabada ugu horeysa waa inaad naftaada iyo qoyskaaga iska diiwaan gelisaa UNHCRta Masar. Haddii aad hore u haysatay kaarkaagii UNHCR hore ayaad u dabooshay tallaabadan.
Iyadoo lagu salaynayo macluumaadka aad siisay UNHCR intii lagu jiray diiwaangelinta, UNHCR waxay awood u yeelan doontaa inay go’aamiso u-qalmitaankaaga gargaarka lacagta caddaanka ah. Haddii macluumaad dheeraad ah loo baahdo, UNHCR waxay kiiskaaga u gudbin doontaa Caritas si ay u hesho waraysi qiimaynta nuglaanta.
Waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa Caritas Baahida Aasaasiga ah si aad ballan ugu qabsato wareysiga qiimeynta haddii aadan horey u sameynin wax wareysi ah oo qiimeynta nuglaanta, ama haddii uu jiro isbedel weyn oo ku yimid xaaladdaada dhaqaale (sida luminta isha ugu weyn ee dakhliga) tan iyo markii waraysigii u dambeeyay ee qiimaynta. Sababtoo ah tirada badan ee dadka codsanaya taageerada, fadlan ballan u qabso waraysi qiimaynta nuglaanta ee Baahiyaha aasaasiga ah ee Caritas. Caritas waxaa laga yaabaa inaysan haysan meel ay kuugu adeegto haddii aad u tagto xafiisyadooda ballan la’aan. Fadlan ogow in dhammaystirka waraysiga macnaheedu maaha in si toos ah lagugu dari doono gargaarka lacagta caddaanka ah. Sidoo kale ogow in Baahiyaha Aasaasiga ah ee Caritas ay mas’uul ka tahay oo kaliya ururinta xogta iyada oo loo marayo wareysi iyo ku siinaya macluumaad muhiim ah, jawaab celin iyo habka jawaabta ee gargaarka lacagta caddaanka ah. Caritas ma gaadho wax go’aan ah oo la xidhiidha xaq u yeelashada lacagta caddaanka ah. UNHCR waa go’aanka kama dambaysta ah ee labada go’aannada bilawga ah iyo kuwa rafcaanka ee la xidhiidha kaalmada lacagta caddaanka ah. Haddii lagu ogaado inaad xaq u leedahay inaad hesho gargaar lacageed UNHCR waxay kugu soo wargelinaysaa SMS lambarka telefoonka aad ka diwaangashan tahay UNHCR.
Sidee UNHCR u go'aamin kartaa qofka u qalma kaalmada lacageed ee ujeedooyinka badan leh?
UNHCR waxay ku tiirsan tahay ilo badan oo macluumaad ah si ay u gaarto go’aannada u-qalmitaanka ee la xiriira kaalmada lacagta caddaanka ah. Macluumaadka loo isticmaalo xulashada waxaa ka mid ah macluumaadka la duubay inta lagu jiro diiwaangelintaada UNHCR iyo mararka qaarkood wareysi ay qaadaan shaqaalaha Caritas iyo sidoo kale macluumaadka kale ee la duubay. Go’aanku wuxuu tixgelinayaa dhowr arrimood sida: maaliyadeed, fayoobid iyo muuqaallada khatarta ah. Waxyaabo kala duwan oo ay ku jiraan da’da qaxoontiga/magangelyo-doonka, meesha uu degan yahay, tirada xubnaha qoyska, heerka waxbarashada, heerka dhaqaalaha, helitaanka gargaar kale, baahiyo gaar ah, xaaladda caafimaad iyo kuwo kale ayaa la tixgaliyaa. Qoxootiga iyo magangelyo-doone kasta profilekiisa waxa la barbar dhigaa qaxoontiga kale iyo magan-gelyo-doonka ka diiwaan gashan UNHCR iyo kan dhaqaale ahaan aad u nugul oo leh astaamo khatar sare leh ayaa la doortaa. Go’aamo kasta oo xaq u yeelasho ah oo la xidhiidha lacagta caddaanka ah ma diidayso ama ma wanaajiso gelitaanka barnaamijyada kale ee kaalmada.
Waxa la i waydiistay in aan bixiyo lacag lagu daro liiska kaalmada lacageed, maxaan sameeyaa?
Fadlan ha aaminin qof kasta oo sheeganaya inuu si toos ah kuugu dari karo liiska ka-faa’iideystayaasha beddelka lacagta ama sheeganayo inuu ogaado sababaha kala hormarinta kiisaska. UNHCR waxay ka shaqaynaysaa sidii loo hubin lahaa in qoysaska saxda ah ee aadka ugu baahan loo doorto gargaar lacageed. Dhammaan adeegyada UNHCR waa bilaash.
Habka u-qalmitaanka iyo go’aaminta si toos ah ayaa loo adeegsadaa iyadoo la isticmaalayo qaacidada miiska mana jirto faragelin bini’aadam oo suurtagal ah. UNHCR waa go’aanka kama dambaysta ah ee la xidhiidha ka mid noqoshada kaalmada lacagta caddaanka ah.
Sideen ku ogaan karaa inaan u qalmo kaalmada lacagta caddaanka ah?
Haddii lagu ogaado inaad xaq u leedahay inaad hesho caawimo caddaan ah UNHCR waxay kugu ogeysiin doontaa SMS lambarka taleefanka aad siisay shaqaalaha diiwaangelinta UNHCR ama UNHCR Infoline. SMS-ka waxa ku jiri doona tafaasiil ku saabsan sida loo ururiyo caawimada (halka laga ururiyo kaalmada, qofka iyo dukumeentiyada (haddii ay jiraan) aad u baahan doonto si aad u muujiso si aad u xaqiijiso aqoonsigaga), iyo sidoo kale wakhtiga kama dambaysta ah ee helitaanka gargaarka lacagta caddaanka ah, waxa kale oo aad heli kartaa la socoshada wacitaanka shaqaalaha Caritas. Fadlan iska hubi inaad xogtaada la xidhiidhid ilaa wakhtigan UNHCR, si aanu awood ugu yeelano inaanu ku helno. Haddii aad beddesho lambarkaaga teleefanka, fadlan hubi inaad nagu soo wargeliso UNHCR Infoline ama qaybta diiwaangelinta adoo isticmaalaya linkigan: https://enketo.unhcr.org/x/9dUBf4OV
Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada lacagta caddaanka ah ee ay bixiso UNHCR?
Wixii su’aalo ah, falcelin ah, iyo cabashooyin ku saabsan gargaarka lacagta caddaanka ah ee ay bixiso UNHCR, fadlan kala xidhiidh mashruuca Baahiyaha aasaasiga ah ee Caritas lambarrada telefoonka ee hoose. Caritas waxay ka jawaabi doontaa dhammaan su’aalahaaga, waxay ku siin doontaa macluumaadka loo baahan yahay waxayna qaadi doontaa tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah, haddii loo baahdo.
Caritas Greater Qaahira:
Maalmaha shaqada iyo saacadaha shaqada: Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8:30 subaxnimo ilaa 3:30 galabnimo. Wuxuu xiran yahay Sabtida iyo Axadda
Maalmaha shaqada iyo saacadaha shaqada: Isniinta ilaa Sabtida 9 subaxnimo ilaa 3:30 galabnimo. Xidhan Jimcaha iyo Axada.
Nambarada xiriirka (lambarada macluumaadka): 15946
Maalmaha shaqada iyo saacadaha shaqada: Axada ilaa Khamiista laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 3:30 galabnimo. Xidhan Jimcaha iyo Sabtida.
Xagee ka dhici doona waraysiga?
Xaaladda masiibada jirta awgeed, iyo taxaddar badbaado ahaan, inta badan wareysiyada waxaa lagu sameyn doonaa dhanka taleefanka iyo xaaladaha xaddidan ee Caritas dhismaha midkood ee Nasr City, 6 Oktoobar, Alexandria ama Damietta, si kastaba ha ahaatee wareysiyada qaar ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan gurigaaga. Qoysaska waxaa lagu wargelin doonaa ka hor taariikhda iyo wakhtiga waraysiga, iyo dukumeenti kasta oo loo baahan doono inta lagu jiro waraysiga telefoonka.
Maxaa dhici doona inta waraysigu socdo?
Dhammaan shaqaalaha Caritas waxay bilaabi doonaan waraysiga telefoonka iyagoo isbar dhigaya, shaqadooda Caritas iyo ujeedada wicitaanka. Waxay sidoo kale kula eegi doonaan macluumaadkaaga diiwaan gelinta si ay u xaqiijiyaan inay runtii yihiin shaqaalaha Caritas. Inta waraysigu socdo, xogwaraysi ayaa lagugu buuxin doonaa.
Intee in le'eg ayaa waraysigu qaadan doonaa?
Wareysigu wuxuu qaadan doonaa ku dhawaad ​​hal saac, iyadoo ku xiran tirada qoyska.
Sideen isku diyaariyaa?
Fadlan hubi in nambarkaaga gacanta ee la cusboonaysiiyay ay ogtahay UNHCR. La xidhiidh UNHCR Infoline haddii ay dhacdo in aad beddesho nambarkaaga, ama qaybta diiwaangelinta UNHCR ee xidhiidhkan: https://enketo.unhcr.org/x/9dUBf4OV
Intaa waxaa dheer, fadlan dukumeentigaaga aqoonsiga UNHCR u diyaar dhammaan xubnaha qoyskaaga.
Haddii ay dhacdo “xafiis” ama “wareysi guri ku saleysan” waxaa lagu weydiin doonaa inaad muujiso dukumeenti kasta oo laga yaabo inaad haysato, sida heshiisyada kirada, biilasha (korontada iyo gaaska), warbixinnada caafimaadka, iwm.
Haddii ay dhacdo waraysi guri ku salaysan, waxaa lagu waydiin doonaa inaad u ogolaato xog-uruiyayaasha inay eegaan meelaha kala duwan ee meesha aad degan tahay.
Yaa ka qayb galaya waraysiga?
Codsadaha maamulaha ee ka diiwaangashan UNHCR waa inuu ku buuxiyaa xog-ururinta xog-ururinta, isaga/isaga ayaa mas’uul ka ah inuu bixiyo macluumaadka saxda ah dhammaan xubnaha ka diiwaangashan galkiisa/keeda waxaana laga doonayaa inuu keeno aqoonsigooda ka hor wareysiga. Haddii booqasho guri loogu baahan yahay waraysiga, dhammaan xubnaha waxa lagu dhiirigelinayaa inay ka soo qaybgalaan waraysiga oo ay xogtooda si toos ah uga buuxiyaan waraysiga.
Ma la waraysan doonaa qoysaska aan diiwaangashanayn?
Qoysaska aan diiwaangashanayn laguma dari doono waraysiyadan.
Ma samayn karo ballan la ii magacaabay. Dib ma u dhigi karaa?
Haa Haddii aad u baahan tahay inaad ballantaada dib u dhigto, fadlan ku wargeli Caritas ugu yaraan laba maalmood oo ogaysiis ah. Waxaad dib u qabsan kartaa adiga oo wacaya lambaradan:
Alexandria: 011 5189 0999
Damietta: 010 1668 4787
Qaahira weeyn iyo maamul goboleedyada kale: 012 8806 4703, 011 2988 0899
Fadlan la soco in lambaradan loogu talagalay dib u habeynta oo keliya.
Haddii Caritas aan hore loogu wargelin joojinta joojinta, waxaa jiri doona dib u dhac waxaana laga yaabaa inaan lagula soo xiriirin ilaa bisha soo socota.
Maxaa dhici doona waraysiga kadib?
Haddii ay dhacdo in laguu doorto inaad hesho kaalmo lacageed, UNHCR waxay kuu soo diri doontaa SMS oo ay ku qoran tahay faahfaahinta ku saabsan sida aad u qaadan karto kaalmadaada lacagta caddaanka ah.
Maxaan sameeyaa haddii wareystaha/ xog-uruiyaha uu i weydiiyo su'aalo ceeb ah?
Fadlan kala xidhiidh Caritas welwelkaaga. Haddii aad awooddo, hubi inaad bixiso magaca xog-uruiyaha/waraysiiyaha kaas oo aad ka walaacsan tahay.
Maxaan sameeyaa haddii wareystaha/ xog-uruiyaha uu ku weydiiyo lacag ama nicmo uu iigu beddelo in uu igu daro kaalmada lacageed?
Adeegyada UNHCR waa bilaash. Ha bixin kharashka waraysiga oo u soo sheeg shilka UNHCR Infoline isla markiiba.
Waxaan kaa codsaneynaa inaadan la macaamilin qof kasta oo sheeganaya inuu bixiyo ama dedejiyo mid ka mid ah adeegyada UNHCR iyo inaad u soo sheegto dhacdada sida kiis khiyaano ah: [email protected]
Sideen ku ogaan karaa inta ay tahay in aan helo?
UNHCR waxay kuu soo diri doontaa SMS ay ku jirto cadadka kaalmadaada lacagta caddaanka ah.
Maxay tahay sababta ay kaalmada lacagta caddaanka ahi u korodhay/ hoos u dhacday?
UNHCR waxa ay ku bixisaa kaalmo lacageed oo ku salaysan miisaan tixgalinaya xubnaha qoyskaaga. Qadarka aad hesho waxa laga yaabaa inay isbedesho iyadoo ay ugu wacan tahay isbeddelada ku yimi qoyskaaga iyo maalgelinta la heli karo.
Intee in le'eg ayaan helayaa muddada kaalmada lacagta caddaanka ah?
Kaalmada lacagta caddaanka ah waxaa la bixiyaa kaliya muddo xaddidan (ilaa hal sano) waxayna ku xiran tahay cusboonaysiinta iyadoo lagu saleynayo baylahnimada joogtada ah iyo helitaanka lacag. UNHCR waxay kuu soo diri doontaa fariin qoraal ah (SMS) teleefankaaga kaas oo ka diiwaan gashan UNHCR taas oo muujinaysa muddada kaalmadaada lacagta caddaanka ah.
Sideen ku ogaan karaa marka kaalmadaydu dhammaan doonto?
UNHCR waxay kuu soo diri doontaa SMS oo ay ku jirto muddada kaalmadaada lacagta caddaanka ah ee lambarka taleefanka ka diiwaangashan UNHCR. Haddii kaalmadaada si lama filaan ah loo joojiyo oo aadan helin fariin qoraal ah oo ay ku jirto taariikhda dhamaadka kaalmada, fadlan la xidhiidh Caritas.
Xagee ka urursadaa kaalmadayda lacagta caddaanka ah?
Waxaad ka soo qaadan kartaa kaalmadaada lacag caddaan ah xafiiska boostada Masar. Haddii ay dhacdo in lagugu ogeysiiyo ururinta lacagta caddaanka ah ee IRIS karti u leh, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad la xidhiidho xafiiska boostada ee IRIS ee ku qoran SMS-ka kaas oo kuugu dhow ciwaanka diiwaangashan. Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa xafiiska boostada ee iris-karti kale si aad u soo qaadato lacagtaada. (liiska xafiisyada boostada ee karti u leh Iris ayaa laga heli karaa boggan.
Sideen ku ogaan karaa in aan lacagta caddaanka ah ku helayo iskaanka Iris ama kaarka UNHCR?
Waxaad ku ogaan kartaa macluumaadkan ogeysiinta SMS-ka ee aad ka heli doonto UNHCR. Haddii ay tahay inaad kaalmada lacagta caddaanka ah ku hesho scan Iris, tan waxa lagu caddayn doonaa SMS-ka. Sidoo kale, hyperlink ee liiska xafiisyada boostada ee karti u leh iris ayaa lagu bixin doonaa SMS-ka.
Haddii kale, iyo haddii SMS-ku aanu sheegin in aad iris-awood u leedahay, markaas waxaad ka heli kartaa kaalmadaada lacagta caddaanka ah laanta boostada ee Masar oo dhan adigoo isticmaalaya kaarkaaga UNHCR.
Tusaalaha SMS-ka ee aad heli doonto ayaa hoos lagu muujiyay:
Aruurinta Lacagta Karti-Qaran:
[NAME] [Case ID] waxa ay heli doontaa kaalmo lacageed [VALUE] iyada oo loo marayo iskaanka IRIS [EPO] marka la gaadho [Dhammaadka DATE]. Si aad u hesho Xafiiska Boostada Masar ee Iris-Enabled ee kuugu dhow fadlan hubi [URL].
Aruurinta Lacagta Aan-Iris:
[NAME] [Case ID] waxa ay heli doontaa kaalmo lacageed [VALUE] iyada oo loo marayo xafiiska boostada Masar [Dhammaadka DATE]. Raac xiriirkan si aad u hesho Xafiiska Boosta ee kuugu dhow [URL].
Haddi aanad wali hubin in ay tahay in aad gargaarkaaga ku hesho baadhista iris-ka, fadlan la xidhiidh khadka telefoonka ee Caritas oo ay ku siin doonaan macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Caritas Qaahira: 011 29880800, 01288064703
Caritas Alex: 034838245, 034875198
Caritas Damietta: 01156624557, 0572432404
Maxaan ku sameeyaa xafiiska boostada si aan u ururiyo kaalmadayda?
Waxaa laga yaabaa in midna lagu weydiiyo
U soo bandhig kaadhka aqoonsiga UNHCR khasnajiga boostada. Xafiiska boostada ayaa dib u eegi doona sawirkaaga, lambarka kiiskaaga iyo magacaaga. markaas, waxaad heli doontaa kaalmada lacagta caddaanka ah. Nidaamku waa isku mid dhammaan xafiisyada boostada.
Ku sawir iris-kaaga iskaanka iris-ka ee xafiiska boostada. Haddii sawirka iris-kaagu uu la mid yahay diiwaannada UNHCR, waxaad heli doontaa kaalmada lacageed. Adigoon u baahnayn inaad soo bandhigto kaadhkaaga UNHCR.
Fadlan hubi inaad ku hayso iris-scanner isla heerka indhahaaga, ma hoos, iyo inaad si toos ah u eegto iris-scanner oo indhahaagu furan yihiin, si loo hubiyo aqoonsiga saxda ah ee indhahaaga.
Waxaan aaday Xafiiska Boostada, waxaana la ii sheegay in aysan jirin lacag ii taal, inkastoo aan helay SMS.
Fadlan hubi inaad raacdo tilmaamaha SMS oo xusuusnow:
Kaliya codsade maamulaha kiiska lagu sheegay SMS ayaa aruurin kara kaalmada. Ma jiro qof kale oo qaadi kara kaalmada lacagta caddaanka ah isagoo ka wakiil ah codsadaha maamulaha.
Hubi inaad ururiso gargaar ka hor wakhtiga kama dambaysta ah ee lacag bixinta.
Xafiiska boostada, waa inaad hubisaa inaad isku heer ku hayso iris-scanner indhahaaga, iyo in indhahaagu ay furan yihiin oo si toos ah u eegayaan iskaanka marka iriskaaga la sawirayo.
U dhowow xafiisyada boostada ee kala duwan ee karti u leh iris
Haddii dhibka aan la xalin ka dib marka la raaco dhammaan kuwa kore, fadlan la xiriir Caritas Basic Needs si aad cabashadaada ugu qorto nidaamka. Tani waa tallaabo aad muhiim u ah. Cabashada rasmiga ah la’aanteed ee Caritas Baahiyaha Aasaasiga ah UNHCR ma awoodi doonto inay si wax ku ool ah wax uga qabato arrinta. La-taliye ka socda Caritas ayaa kaala hadli doona oo kaa caawin doona xallinta dhibaatada wuxuuna sidoo kale ku qori doonaa cabashadaada nidaamka. UNHCR waxay baari doontaa sababahaaga haddii la ogaado inaad raacday tillaabooyinka sare, UNHCR waxay dib u bixin doontaa kaalmada lacagta caddaanka ah ee saxda ah 60 maalmood gudahooda laga bilaabo wakhtiga kama dambaysta ah ee lacagta caddaanka ah. SMS ayaa lagugu ogeysiin doonaa goorta, meesha, sida aad u qaadan karto kaalmadaada.
Fadlan ogow in dhammaan cabashooyinka la xiriira kaalmada lacagta caddaanka ah ee UNHCR ay tahay in lagu diiwaan geliyo baahiyaha aasaasiga ah ee Caritas. Laguma diiwaangeliyo xafiisyada UNHCR.
Waxaan helay SMS ogeysiis ah in aan xaq u leeyahay kaalmada lacagta caddaanka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan haystaa kaarka UNHCR oo dhacay. Maxaan sameeyaa?
Xafiiska boostada ayaa ku siin doona kaalmada lacagta caddaanka ah inkasta oo dukumeentigu dhacay. Tani waa ka reebis ay ugu wacan tahay xaaladda COVID-19 ee hadda jirta.
Haddii dhibaatadu sii socoto, fadlan la xidhiidh khadka tooska ah ee Caritas waxayna kaa caawin doonaan arrintan.
Waxaan qabaa xaalad degdeg ah mana tagi karo xafiiska boostada si aan u helo deeqda (maalintii aan helay SMS-ka). Maxaa samayn karaa?
UNHCR waxa ay aad u danaynaysaa in ay siiso qaxootiga iyo magangalyo-doonka wakhti ku filan oo ay ku kaashaadaan deeqda. Sidaa darteed, UNHCR waxay inta badan ku kordhisaa muddada ururinta 15 maalmood. Wakhtiga saxda ah waxa lagu wargalin doonaa qaxootiga iyo magangelyo-doonka xaqa u leh fariinta qoraalka ah ee ay soo dirto UNHCR, markaa fadlan la xidhiidh xafiiska boostada ee kuugu dhow ka hor inta aanu dhammaan wakhtiga ururinta.
Waxa aan helay SMS igu wargelinaya in aan u dhawaado xafiiska Boostada si aan uga soo qaato kaalmadayda lacagta caddaanka ah ee iskaanka iris-ka ah, laakiin xaalad caafimaad ayaa indhahayga ku haysa. Maxaan sameeyaa?
Haddii aad la ildaran tahay cillad aragga ama dhibaatooyinka indhaha sida indho-beelka ama xaalado kale oo keeni kara cilad-sheegid iris, fadlan hubi inaad tan u wargeliso Caritas oo habka ururintaada waa la beddeli doonaa. Waxaad heli doontaa SMS kale oo kuu sheegaya wakhtiga cusub ee kaalmada lacagta caddaanka ah ee kaadhkaaga UNHCR.
Yaa soo ururinaya lacagta?
Codsadaha maamulaha ah ee ka diiwaangashan UNHCR waxa uu ku helayaa kaalmada lacagta caddaanka ah isagoo ka wakiil ah qoyska. Ilaa, madaxa qoysku go’aansado inuu u wakiisho shaqsi kale oo kiiska ku jira si uu u helo dhaqaale isaga/iyada ka wakiil ah. Si aad u wakiisho qof ku jira kiiskaaga si uu u ururiyo kaalmada lacagta caddaanka ah isagoo ku hadlaya magacaaga, fadlan la xiriir Caritas si aad u buuxiso oo aad u saxiixdo codsiga ergada.
Waxaan rabaa in xubnaha qoyskayga [ilmaha, walaalka, xaaska] ay u soo ururiyaan lacagta kaalmada aniga oo ku hadlaya magacayga, maxaan sameeyaa?
Fadlan la xidhiidh Caritas si aad uga warbixiso arrinta waxayna ku qaadi doonaan habka. Waxaa lagaa filayaa inaad buuxiso foom caadi ah oo tilmaamaya oggolaanshahaaga inaad u magacowdo qof kale oo leh isla lambarka kiiska UNHCR si uu u helo kaalmadaada lacageed. Nidaamyada waxaa loo dejiyay si loo ilaaliyo xaqa aad u leedahay. iskaashigaaga ayaa loo baahan yahay.
Maxaan sameeyaa haddii aan ku khilaafo madaxa qoyska qaybinta lacagta?
Inkastoo kaalmada lacageed ee mabda’a ka faa’iidaystaha uu helo loogu talagalay in lagu wada faa’iidaysto qoyska oo dhan, UNHCR ma farageliso isku dhacyada qoyska si ay u go’aamiso cidda madaxa qoyska ah iyo cidda u soo ururisa kaalmada lacageed ee magacaaga. Waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad qoys ahaan wax wada qabtaan oo aad isku dayaan inaad xal u raadisaan khilaafkan.
Maxaan sameeyaa haddii qoyskeena uu isbedelay?
Fadlan la socodsii UNHCR isbeddelkan qoyska ka kooban. Waxa laguu wareejin doonaa si aad ballan u qabsato si aad u hubiso in xubnaha saxda ah ee qoyskaaga ay si sax ah uga muuqato xogta UNHCR.
Ma helayo SMS-ka kaalmada lacagta caddaanka ah; laakiin markaan tago Xafiiska Boosta magacayga ayaa liiska ku jira, waa maxay sababta?
SMS waa habka ugu muhiimsan ee wada xidhiidhka UNHCR iyo adiga, iyada oo loo marayo lambarka telefoonka aad siisay UNHCR. Fadlan hubi in dhammaan macluumaadkaaga xiriirka lagu cusboonaysiiyay diiwaangelinta UNHCR iyada oo loo marayo iskuxirkan iyo/ama la xiriir UNHCR Infoline
Waxa aan seegay xilligii ururinta UNHCR wali ma ii soo diri kartaa lacagta?
Maya. Kaalmada lacagta caddaanka ah ayaa laga heli karaa xafiiska boostada ilaa kama dambaysta lagu sheegay SMS.
Fadlan hubi inaad ku soo ururiso kaalmada lacagta caddaanka ah waqtigii loogu talagalay. Dhammaadka xilliga lacag ururinta UNHCR waxay soo ceshataa kaalmada lacageed.
Yaan la xidhiidhaa haddii ay ila kulmaan dhibaatooyin kale ururinta kaalmadayda lacagta caddaanka ah?
Fadlan wac Khadka Baahiyaha Aasaasiga ah ee Caritas haddii ay dhacdo inaad la kulanto wax dhibaato ah. La-taliyayaasha Caritas ayaa ku siin doona talada kugu habboon waxayna qaadi doonaan tallaabo kasta oo loo baahdo. (Fadlan sida ugu dhakhsaha badan u samee ka hor wakhtiga kama dambaysta ah si aad u awooddo inaad xalliso dhibaatadaada / xalliso dhibaatadaada wakhtiga ku habboon).
Fadlan ogow in dhammaan weydiimaha iyo cabashooyinka la xidhiidha gargaarka lacagta caddaanka ah ee UNHCR ay tahay in lagu diiwaan geliyo Baahiyaha aasaasiga ah ee Caritas. Laguma diiwaangeliyo xafiisyada UNHCR. Cabashada rasmiga ah ee Caritas la’aanteed baahiyaha aasaasiga ah UNHCR ma awoodi doonto in ay arrintaada wax ka qabato si wax ku ool ah.
Go’aamada u-qalmashada iyo magdhawga ee ay qaadato UNHCR waxa si toos ah laguugu soo gudbin doonaa SMS Sidaa darteed waa muhiim in lambarkaaga teleefoonkaaga la casriyeeyo.
Qofka aan u magacaabay in uu helo kaalmada aniga oo wakiil ka ah ayaa diiday in uu i siiyo lacagta. Maxaan sameeyaa?
Waxaad soo gudbin kartaa codsi ah in aad tirtirto/ka noqoto magacaabistaada ururiyaha kale ee Caritas. Codsigaaga dib ayaa loo eegi doonaa, waxaana go’aan lagu gaari doonaa codsigaaga.
Maxaa dhacaya haddii aanan soo ururin kaalmada lacagta caddaanka ah?
Haddii aad ku guul darreysato inaad soo qaadato gargaarka lacagta caddaanka ah, waxaa laga yaabaa in UNHCR ama lammaane kula soo xiriiro taleefankaaga oo lagu weydiiyo haddii aad la kulanto wax dhibaato ah helitaanka gargaarka. Haddii aanad u soo ururin kaalmada lacagta caddaanka ah saddex wareeg oo qaybinta oo isku xigta, kiiskaaga waa laga saarayaa liiska lacagta caddaanka ah waxaana meeshaada lagu dari doonaa qoys kale oo nugul. Fadlan hubi inaad la xidhiidho Caritas Infoline mar kasta oo aad la kulanto xaalad kasta oo kaa horjoogsata inaad soo ururiso kaalmadaada lacagta caddaanka ah.
Waxa la i soo wacay taleefoon urur oo iga soo wacay su'aalo ku saabsan kaalmadayda lacagta caddaanka ah. Tani ma caadi baa? Miyaan bixiyaa jawaab celin iyo jawaab celin?
Xiliyada qaar UNHCR waxay si bakhtiyaa nasiib ah u doorataa kooxaha qaxoontiga ah ee ku jira kaalmada lacagta caddaanka ah si ay u ururiyaan aragtiyaha ku saabsan barnaamijka caawimada lacagta caddaanka ah iyada oo la adeegsanayo shirkad kormeere oo cid saddexaad oo idman oo la yiraahdo “SAGACI”.
Fadlan u fur jawaabahaaga si ay u caawiyaan UNHCR iyo La-hawlgalayaasheeda horumarinta adeegyada la siiyo qaxootiga. Sahanku ma saamaynayo u-qalmitaankaaga si aad u hesho kaalmo lacageed. Dhammaan sahannada la socodka waa ikhtiyaar mana saameynayaan kaalmadaada, jawaabaha aad bixiso waxaa loola dhaqmi doonaa sir adag.
Shaqaalaha SAGACI waxay isticmaali doonaan mid ka mid ah lambarradan soo socda, waxaan ku weydiinaynaa inaad la shaqeyso qofka soo wacaya oo keliya haddii ay ku wacayaan mid ka mid ah nambaradan:
01101447053 – 01110464504 – 01015435263 – 01098684165 – 01101447051
01101447083 – 01101447052 – 01015815687 – 01020649547 – 01112139489 – 0110103627
Hadda kama helayo kaalmada lacageed ee UNHCR, mana garanayo sababta. Maxaan sameeyaa?
UNHCR waxay si joogto ah u eegtaa xogta qoysaska Masar ka diiwaangashan. Saddexdii biloodba mar, tiro qoysas ah ayaa lagu daraa/dib loogu daraa kaalmo lacageed oo ku salaysan falanqaynta xogta la ururiyey. Haddii xaaladaada si weyn wax looga bedelay saddex bilood gudahood kadib qiimayntii/waraysigii u dambeeyay (sida luminta isha ugu muhiimsan ee dakhliga) fadlan kala xidhiidh Caritas ballan kuu tilmaamaysa sababahaaga. Codsigaga waxaa dib u eegi doonta UNHCR waxaana laga yaabaa in ay kula soo xiriirto Caritas si aad wareysi kale u yeelato.
Uma maleynayo in go'aanka la iga saaray liiska kaalmada lacageed uu ahaa mid sax ah. Waxaan rabaa inaan ka cawdo
UNHCR waxay si joogto ah u eegtaa xogta qoysaska Masar ka diiwaangashan. Saddexdii biloodba mar, tiro qoysas ah ayaa lagu daraa/dib loogu daraa kaalmo lacageed oo ku salaysan falanqaynta xogta la ururiyey. Haddii aad hayso sababo xooggan oo aad ku aaminsan tahay inaad aad u nugul tahay oo aad u qalanto gargaarka lacagta caddaanka ah, fadlan la xidhiidh Caritas ballan si aad u gudbiso rafcaan ka dhan ah go’aanka ka-saarista. Codsigaaga waxa dib u eegi doonta UNHCR,waxana aad SMS ka heli doonta UNHCR haddii ay dhacdo in mar kale lagugu daro kaalmada lacageed.
Waxaan kala hadlay shaqaalaha UNHCR/Caritas kaalmadayda lacagta caddaanka ah waxayna ahaayeen edeb darro. Maxaan sameeyaa?
Haddii aad aaminsantahay in shaqaalaha bini’aadantinimo aysan u dhaqmin si xirfadeysan inta lagu guda jiro isdhexgalkaaga, waxaad raaci kartaa mid ka mid ah falalka soo socda:
Codso ballan la-taliye si aad ugala hadasho welwelkaaga
Soo gudbi cabasho qoraal ah oo ku rid sanduuqyada cabashada ee UNHCR;
U gudbi cabasho qoraal ah shaqaalaha UNHCR marka ay booqanayaan goobtaada;
U dir email cabashadaada ku socota: [email protected]
Cabashooyinka qarsoodiga ah lagama baaraandegi doono Waa inaad sheegtaa magacaaga, lambarkaaga kiiska iyo macluumaadka xiriirka. Fadlan hubi in aqoonsigaaga aan la sii wadaagi doonin ogolaanshahaaga la’aanteed. Fadlan hubi in cabashadaadu aanay sinaba saamayn ugu yeelan doonin kaalmadaada. Fadlan ogow kanaalada sare waxa kaliya oo la isticmaalaa haddii aad cabasho ka qabto UNHCR/Caritas shaqaalaha ee maaha wax ku saabsan ku darista kaalmada lacageed ama macluumaadka guud.
Waa maxay deeqda jiilaalka?
UNHCR waxay siisaa deeq lacageed oo hal mar ah qaxootiga nugul iyo qoysaska magangalyo-doonka ah ee ka diiwaan gashan Masar iyadoo lagu saleynayo shuruudaha nuglaanshaha ee qiimeeya dayacanka dhaqan-dhaqaale iyo khataraha ilaalinta. Deeqdan lacageed ayaa loogu talagalay in lagu taageero qoysaska si ay u daboosho qaar ka mid ah baahiyahooda xilliga jiilaalka, si ay u diirranaadaan oo loo ilaaliyo.
Intee lacag ah ayaan heli doonaa deeqda jiilaalka iyo ilaa intee?
Deeqda jiilaalka waa deeq hal mar kaliya ah. Qof kastaa wuxuu heli doonaa 1,200 EGP. Fadlan ogow in wadarta lacagta deeqda qoyska ay kala duwan tahay iyadoo ku xiran tirada xubnaha qoyska ee ku taxan faylkaaga.
Sidee baa la ii ogaysiinayaa haddii aan u qalmo kaalmada lacagta caddaanka ah?
Sida dhammaan noocyada kale ee kaalmada lacageed ee ay bixiso UNHCR, haddii aad u qalanto deeqda jiilaalka, waxaad heli doontaa SMS-ka telefoonka gacanta ee ka diiwaangashan database UNHCR oo lagugu ogeysiinayo helitaanka deeqda iyo waqtiga kama dambaysta ah ee helitaanka deeqda xafiiska boostada.
Waa maxay sababta aan u heli waayay SMS-ka ii sheegaysa in aan u qalmo deeqda kaalmada jiilaalka?
UNHCR waxay dib u eegtaa liiska qoysaska u qalma deeqda jiilaalka sannad kasta iyadoo ku salaynaysa dhawr arrimood oo ay ka mid yihiin cadadka maalgelinta la hayo, shuruudaha xulashada iyo xaaladda qoysaska oo laga yaabo inay sannad ka beddelaan sannad kale. Sanadihii la soo dhaafay, UNHCR waxa ay la kulantay xaddidaad maalgelineed kuwaas oo si xun u saameeyay awooddeeda ay uga jawaabto baahiyaha qoysas badan oo nugul. Sidaa darteed, UNHCR waxay ku dadaalaysaa in qoysaska aan horay uga faa’iidaysan deeqdan lagu daro liiska dadka xaqa u leh si inta ugu badan ee qaxootiga iyo magangalyo-doonka ah ee nugul ay u helaan deeqda sannadaha.
Ma jiraa wax isbeddel ah oo ku yimid qaabka waraysiga iyadoo la tixgelinayo COVID-19?
Si looga digtoonaado badbaadada (iyo si loo yareeyo khatarta gudbinta fayraska), waraysiyada hadda waxa lagu samayn doonaa meel fog oo taleefoonka ah. Xaalado aad u xaddidan, wareysiyo shaqsi ah ayaa lagu sameyn karaa dhismaha Caritas.
Maxaa dhacaya haddii aanan rabin in wareysiga lagu qaado taleefanka?
Nidaamku waa iskaa wax u qabso xog ururinna lama sameyn doono ogolaanshahaaga la’aanteed. Waxa ka reeban waraysiyada taleefoonada fog waxa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka soo socda, kuwaas oo mudnaanta la siin doono waraysiyada xafiiska ku salaysan iyadoo la qaadayo talaabooyinka taxadarka lagama maarmaanka ah:
Shakhsiyaadka qaba naafonimada qaybeed sida naafo hadalka/maqalka, taas oo si xun u saamayn doonta waraysigooda haddii lagu qabto telefoonka.
Shakhsiyaadka halista ugu jira ee muujiya awood la’aanta (sababtoo ah nabadgelyada iyo/ama welwelka sirta awgeed) inay waraysiyada ka qaadaan meesha ay hadda deggan yihiin.
Dukumentigayga UNHCR wuu dhacay mana awoodo inaan dib u cusboonaysiiyo wakhtigan. Waxaan ka baqayaa in loo tixgeliyo inay yihiin kuwo aan sax ahayn. Maxaan sameeyaa?
Dukumeentiyada UNHCR ee dhacay waxa loo tixgalinayaa inay jiraan ilaa iyo inta aanu kiisku xidhnayn ama aan la hawlgelin. Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah, fadlan ku ogeysii UNHCR xaggayaga Infoline ama [email protected] .
Waa maxay tillaabooyinka badbaadada iyo caafimaadka ee lagu fuliyo qolalka waraysiga si loo yareeyo khatarta gudbinta COVID-19?
Goobaha soo dhaweynta waxaa lagu qalabeeyay nadiifiyaha.
Nadaafadda joogtada ah ee meelaha la isticmaalo waxay dhacdaa dhammaadka maalin kasta oo shaqo.
Qalabka Ilaalinta Shakhsi ahaaneed waxaa la siiyaa shaqaalaha wareysiga, turjubaanada iyo waardiyayaasha.
Dhammaan dadka u soo socda xafiiska waxa ku waajib ah inay xidhaan maaskaro weji ah. Dadka aan xidhnayn maaskaro ma awoodi doonaan inay soo galaan dhismaha.
Hubinta heerkulka qasabka ah ee qaxootiga iyo shaqaalaha ayaa ka dhaca irdaha UNHCR.
Dhammaan taxaddarrada lagama maarmaanka ah waa la qaadaa marka la eego maaraynta dukumentiyada.
Sideen ku xaqiijin karaa aqoonsiga weriyahayga xagga telefoonka?
Dhammaan shaqaalaha Caritas waxay billaabaan telifoonka/wareysiga Signal-ka iyagoo is-baray, shaqadooda Caritas iyo ujeedada wacitaanka. Waxay sidoo kale kula eegi doonaan macluumaadkaaga diiwaan gelinta si ay u xaqiijiyaan inay runtii yihiin shaqaalaha Caritas.
Waraystahaagu waxa uu kaaga soo wici doona mid ka mid ah nambarada soo socda oo kaliya:
Fadlan ogow in lambaradan aysan heli karin wax wicis ah. Haddii aad u baahan tahay inaad la xidhiidho UNHCR ama mid ka mid ah la-hawlgalayaasheeda, fadlan isticmaal nambarada Infoline ee loogu talagalay in lagu helo wicitaannada qaxootiga iyo magangelyo-doonka.
Waxaad hubin kartaa in laguu qorsheeyey qiimeynta nuglaanshaha adiga oo wacaya Khadkayaga inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah.
Waxaa la i waydiistay inaan soo dejiyo codsiga Signal ee waraysiga telefoonka ee Caritas. Waa maxay codsigan?
Codsiga Signal waa app farimo ah, sida WhatsApp, Telegram ama iMessage, laakiin waa mid bixiya amniga oo xafidaya macluumaadka ugu yar ee isticmaaleyaasheeda.
Sideen u soo dejisan karaa oo u isticmaali karaa codsigan?
Tag App Store ee iPhone ama Play Store on Android oo ka raadi Signal
Ku soo deji Signal taleefankaaga casriga ah (taleefankaagu waa inuu lahaadaa iOS 10.0+ ama Android 4.4+).
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato lambarka taleefanka qofka aad rabto inaad la xiriirto.
Qofkaasi waa inuu sidoo kale lahaadaa akoon Signal ah.
Labada taleefanba waxay u baahan yihiin xiriir internet oo firfircoon.
Haddii ay dhacdo inaad awoodi waydo inaad raacdo tillaabooyinka la sheegay, ku waraystahaagu wuu ku caawin karaa ka hor waraysiga.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan codsiga signalka, fadlan booqo xidhiidhkan: https://support.signal.org/hc/en-us
Sideen u diri karaa dukumeenti la codsaday inta lagu jiro waraysi fog?
Dukumeentiyada la codsaday waxaa lagu wareejin karaa codsiga Signalka. Xaalado aad u xaddidan, dukumentiyada waxaa loo dhiibi karaa jir ahaan iyadoo la sii wado dhammaan taxaddarrada lagama maarmaanka ah oo ay ku jiraan xirashada maaskaro iyo galoofyada.
Kiisaskee ayaa mudnaanta la siinayaa in la maro qiimeynta?
Kiisaska balamaha la qorsheeyay kahor Covid-19;
Kiisaska lagu aqoonsaday ilaalinta UNHCR ha noqoto taageero lacageed oo ku meel gaadh ah ama qiimayn degdeg ah;
Kiisaska codsanaya qiimayno cusub oo aan wax qiimayn ah lagu samayn sanadaha 2019/20;
Kiisaska gargaarkooda/go’aannada u-qalmitaanka ay ku dhow yihiin inay dhacaan.
Waa maxay kiisaska laga yaabo inaanan awoodin inaan soo ururiyo kaalmada lacagta caddaanka ah ee aan xaqa u leeyahay?
Hadda ka dib ma awoodi doontid inaad soo ururiso kaalmada lacagta caddaanka ah ee aad xaqa u leedahay xaaladaha soo socda:
Waxaad si ikhtiyaari ah u xidhay galkii aad UNHCR u lahayd
Diiwaanada aan shaqayn-/xiran ee UNHCR
Ku guuldareysiga in la ururiyo kaalmada lacagta caddaanka ah saddex bilood oo isku xigta iyada oo aan la bixin sababo macquul ah.